15th International gvSIG Musangano - Zuva 2 - Geofumadas
15th International gvSIG Musangano - Zuva 2
Mbudzi, 2019 GvSIG, Innovations
Geofumadas akafukidza mumunhu mazuva matatu e15as International Mazuva e gvSIG muValencia. Pazuva repiri zvirongwa zvakakamurwa kuva 4 thematic block kunge zuva rakapfuura, kutanga ne gvSIG Desktop, zvese zvine chekuita nenhau uye kubatanidzwa kune system zvakaratidzwa pano.
Vatauri vekutanga block, vese vamiriri ve gvSIG Association, vakagadzirisa nyaya dzakadai
Chii chitsva mu gvSIG Desktop 2.5? yakaitwa naMario Carrera,
Mutsva wekutaura jenareta: kuwanda mukana we gvSIG Desktop,
Kutsvaga iyo nyowani gvSIG Desktop fomu jenareta,
JasperSoft: mienzaniso yekushandisa mushumo dhizaini kubatanidzwa mune gvSIG Desktop naJosé Olivas.
Tevere, iwo anovharidzira block anoenderana neManejimendi Management, achivhura danho iri Mr. Álvaro Anguix, aine pepa Zvinodiwa uye zvikwanisiro zvekushandisa IDE padanho rezvematunhu, uyo akataura kuti nguva zhinji nzvimbo / nzvimbo yepa data haisi iyo protagonist kutsanangura mamwe maitiro kana zviitiko zvinoitika, asi, icho chikamu chakakosha chehuwandu hukuru hwe data iyo inozopa zvakanakisa zvemukati uye zvevatariri.
"Chokwadi chaicho chatinowana mumadhizaini emunharaunda, ndechekuti ruzivo ruripo, asi hazvizivikanwe kuti rwuripo, ndiko kuti, harwunyorwe, uye haruzivikanwe, rwunogovaniswa zvakanyanya padanho remanisita." Saizvozvo, mune dzakawanda nyaya kudzokorodzwa kwemashoko, akakosha masepala haana chirongwa chakasarudzika chemumugwagwa, asi, mapurisa ane imwe, kuronga kwemaguta kunoshandisa imwe, uye ndeyekuti iyo katuni yeruzivo apo ruzivo rwese rwunodzingwa runofanira kuve rwakasarudzika uye rwakagadziridzwa zvese ”Álvaro Anguix.
Mharidzo yakaenderera yaive yaEulogio Eslotano, uyo airatidza kuti maturusi anogona kuderedza sei nyaya yekushomeka kwevanhu, ine musoro wayo AytoSIG. Spatial Dhata dzezvivakwa mumadhorobha madhorobha madiki. Iwo madhorobha madiki akataurwa naEsktano, anoreva kune avo vari kumaruwa matunhu, ayo ane mari shoma uye zviwanikwa zvekushandisa kwavo kwakanaka. Saka, chii chaive chirongwa, kuburikidza ne-gvSIG Online, ivo vakabatanidza nhepfenyuro yezvishandiso kuitira kuti vanhu vanofanirwa kuendesa ruzivo munharaunda, vanongoda kupinda muchirongwa uye kushandisa bhatani kuratidza zvese zvakakumbirwa ruzivo.
"Iwe unogona kuwana kushandiswa kwerudzi urwu rwezvishandiso zveGIS mumapurovhinzi akakosha, uko kune vanhu vazhinji vanobvunza ruzivo, asi matunhu madiki ane matambudziko avo ezuva nezuva" Eulogio Eslotano -AytoSIG
Ichi chikamu chakaguma nehuratidziro dzaAnton García Benlloch Management yezvivakwa zveGuta reBéterauye Vicente Bou weOnda City Council naSilvia Marzal UTE Pavapark-Nunsys, avo vakaburitsa nyaya yakabudirira yekushandisa IDE muOnda City Council. Nyaya yekupedzisira iyi yaive yakanyanya, nekuti Onda City Council yaimboita mbiri dzakatadza kuyedza kuumba IDE. Nekudaro, kana tato nzwisisa kukosha kwe chishandiso senge ichi, zvinova zvakakosha kuti zviitiswe kuita, pamwe chete nevamwe vatambi venzvimbo, vanozopa ruzivo rwakakodzera kupa chikafu ichi SDI.
Pakupedzisira, kushushikana kwakasimudzwa nevange varipo uye nevatori vechikamu, avo vakati kana paine mukana wekuraramisa kana kukurudzira kushandiswa kwerimwe zita remazita. Asi hazvisi zvekungotanga imwe paramita yekuratidzira kana manejimendi yedata, nekuti izvi zvinopa dambudziko rakakura kune avo vanobatika mune ino nyika yekutandarira dhata management.
Kana riri riri basa rakaoma, kunzwisisa simba iro maturusi akadai se gvSig suite inogona kupa, ingofungidzira uchiedza kusvika kubvumirano nevatengi ve data, nevane masimba, nevose avo vanotora chikamu muchirongwa ichi chekubata data, kana sekureva kwaAlvaro Anguix "Nhasi kune mhando dzedata uye unogona kuedza izvi, asi hapana anogona kumanikidza vane masimba - mune iyi nhungamireta - kushandisa / kuchinjika neiyi modhi yedata."
"Pakupedzisira iri rese ibasa risingarairwi nemunhu uye hapana anoripa, uye rakaoma, asi kushandisa mazwi" mahara software nenharaunda ", inogona kunge iri pekutanga kugadzira nzvimbo yekutora chikamu kuti vabvumirane pane zvinongedzo, zvisinei, zvinoita kwandiri yakaoma kwazvo kugona kuronga mapoka ese maonero mune imwechete. Ndosaka makambani akazvimirira achigadzira zita rezita uye vamwe vashandisi / mahunyanzvi vabatana naro "Eulogio Escribano - AytoSIG
Kune rimwe divi, kusaziva kwekuunganidzwa kwedata uye kunyengera kuri nyore, nekuti nguva zhinji rumwe ruzivo rwunosvitswa rwunosvitswa nekusungirwa mudhatabhesi, vobva vadzoreredza zvachose, paine tafura yechiratidzo inotyisa kushandisa. . Mune ino block chaiyo, kushaya simba izvo nyika dzakaita seSpain dzichine muchiitiko ichi zvakaonekwa maererano nesparatal data management uye kushandiswa kwemidziyo.
Iyo yekufungidzira block yakanangana neBiodiversity uye Nzvimbo, zviitiko apo data yemahara yaishandiswa - yemahara satellite mifananidzo - uye gvSIG sechinhu chinotakurika dhata rekushandisa Kufungidzirwa kwetembiricha yepasi munhoroondo Landsat 5 mifananidzo nenzira yeimwe-chiteshi gadziriso yemuchadenga mune inopisa yeTempisque -Bebedero rwizi rwizi. Rubén Martínez (Yunivhesiti yeCosta Rica). Muchidzidzo ichi, iyo satellite data yekubvisa nzira yakanyatsoratidzwa, yekutarisa nzvimbo.
Chikamu chekupedzisira, chakatsaurirwa kuGeomatics, chakatanga nekutaura kwaAnton Benlloch, akataura nezve mashandisiro eGIS nenyanzvi muGeomatics, kuongorora nhoroondo, ichiratidza mashandisirwo akaitwa vatambi vehunyanzvi Kubudirira mune zvako zviito. Benlloch akaenderera mberi nerondedzero yeminda yekushandisa iyo nyanzvi dze geomatics, kuti varambe vachiratidzira kuti ivo havana kungoiswa kune dhizaini yekotuni.
Iyo gvSIG Association yakaratidza kuti inoenderera mberi kubheja kuchizvarwa chitsva, ichitsigira nekukoka vadzidzi kuti vape iyo yakakosha kutsvakwa kune aya Mazuva Nyika dzese MuBiodiversity and Environment block, mudzidzi Ángela Casas akatora pasi ndokutaura nezve kushandiswa kwe gvSIG mukutarisira kwezvakatipoteredza, nemusoro wenyaya Micro dura yemaruva muSierra del Cid, Petrer (Alicante). Kana ari wake, mudzidzi Andrés Martínez González, anobva ku Autonomous University yeMexico, akatsanangura GINI Index Kugadziriswa seyipi sosi yekuverenga kwenzvimbo kuverenga kuburikidza neye gvSIG software.
Yatova yezuva rekupedzisira reMusangano, kupinda kwevatori vechikamu vakambonyoresa mumahofisi emahara, se
Nhanganyaya kune gvSIG Online uye Thermal Remote Sensing ne gvSIG, kwavachazowana certification kubva kune gvSIG Association.
Isu tinosimbisa kuti takambopinda mumisangano yekutsvagurudza yakaita seiyi, uye zvakakodzera kuti tizive kuedza kweGvSIG Association kuratidza kuti neyemahara software tinogona kugadzira uye kubata ese marudzi e geospatial data. Vazhinji parizvino vakasungirirwa kune software software, nekuda kweiyo chete chikonzero ivo vasina kubvumidzwa kuona uye kuongorora zvese zvakanakira izvi uye zvimwe zvisiri-zvemahara; asi zvakare nekuti kugona kutengesa izvi pasi penzira ine mwero zvinoreva kusiya zvigaro zvakanyanyisa uye kutarisa kukwikwidza.
Previous Post«Previous 15th International gvSIG Musangano - zuva 1
Next Post Plex.Earth Timeviews inopa AEC nyanzvi nemifananidzo yazvino satellite mukati me AutoCADNext »